Abalawuli bezulu: incazelo nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sikhuluma ngesimo sezulu, asikwazi ukwehluleka ukukhumbula zonke izici ezisinqumayo, ngoba isimo sezulu yisethi yezimo zomkhathi eziveza indawo ethile. Le sethi yezimo zomkhathi ibizwa izilawuli zezulu. Futhi ukuthi okuguquguqukayo kwayo yikhona okwenza kube nesimo sezulu esisodwa noma esinye kokuthize emhlabeni jikelele.
Kule ndatshana sizohlaziya konke okuguquguqukayo kwesimo sezulu okwaziwa ngokuthi izilawuli zezulu bese sizichaza ngamunye ngamunye. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinto ezibangela isimo sezulu? Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi 🙂
1 Isimo sezulu, uhlelo oluyinkimbinkimbi
2 Ukuhlukahluka kwesimo sezulu
3 Coastal zone vs maphakathi nezwe
4 Abalawuli besimo sezulu nencazelo yabo
Isimo sezulu, uhlelo oluyinkimbinkimbi
Ukuqonda yonke into ephathelene nabalawuli besimo sezulu, kuyadingeka ukuthi uqale phansi ukuthi isimo sezulu akuyona into elula ukuyiqonda. Kuyindlela eyinkimbinkimbi futhi kunzima kakhulu ukuyibikezela. Yize isimo sezulu sikutshela "kalula" ukuthi kusasa lizokuna nokuthi yiziphi izindawo ngqo, lokho kudinga isifundo esihle ngemuva kwaso.
Kufanele uhlaziye ukuguquguquka okuningi kwesimo sezulu njenge izinga lokushisa, umswakama, imvula, umoya, ingcindezi, njll. Musa ukudida isimo sezulu nesimo sezulu. Isimo sezulu yisimo sezulu esizoba ngesikhathi esithile. Isimo sezulu yisilinganiso sazo zonke izinto eziguquguqukayo ezakha uhlelo futhi, ngakho-ke, yilokho okunquma indawo ethile yezwe.
Ukwazi isimo sezulu sendawo, kuyadingeka ukuthi ufunde izinto zemvelo njengokuphakama, i-latitude, ukuma kokukhululeka, imisinga yasolwandle, ibanga ukusuka olwandle, ukuqondiswa yimimoya, ubude bezinkathi zonyaka noma zezwekazi. Zonke lezi zinto ziyangenelela ezicini zesimo sezulu esisodwa noma esinye.
Isibonelo, i-latitude iyona enqumayo ukuthambekela imisebe yelanga okushaya ngayo indawo. Banquma futhi amahora emini nasebusuku. Lokhu kuthatha isinqumo sokwazi inani lemisebe yelanga ezokwenzeka usuku lonke, ngakho-ke, amazinga okushisa. Ngaphezu kwalokho, kuthinta nendawo yeziphepho kanye nama-anticyclone.
Ukuhluka kwesimo sezulu kunomsebenzi waso uma kukhulunywa ngokwazi isimo sezulu sendawo. Ngemuva kwakho konke, isimo sezulu siwumphumela wesenzo salezi ziguquko ngokuhamba kwesikhathi. Ngeke wazi isimo sezulu sendawo ngokulinganisa okuguquguqukayo izinyanga ezimbalwa noma iminyaka. Isimo sezulu singanqunywa ngemuva kwezifundo eziningi ezithathe amashumi eminyaka.
Kodwa-ke, isimo sezulu sesifunda asihlali ngaso sonke isikhathi. Ngokuhamba kwesikhathi futhi, ngaphezu kwakho konke, ngesenzo somuntu (bheka Umphumela wokushisaIsimo sezulu ezifundeni eziningi siyashintsha.
Futhi ukuthi okuguqukayo njengalokho okushiwo ngaphambili nakho kuyashintsha ngezinga elincane futhi kancane kancane ngokuhamba kwesikhathi. Isibonelo, ukuphakama nokuma kokukhululeka yizinto ezimbili ezibalulekile okufanele uzicabangele lapho uchaza isimo sezulu. Lokhu kungenxa yokuthi idolobha elisungulwe endaweni enomthunzi alifani nelanga. Futhi akufani uma idolobha lisendaweni lapho kuvunguza khona umoya ohlangothini olubheke ngasemoyeni noma oluya emazingeni aphansi.
Izikhathi zonyaka nazo zidlala indima ebalulekile. Ensimini ngayinye izikhathi zonyaka zehlukile. Ekwindla kungoma endaweni eyodwa yeplanethi kunenye. Izici eziningi zesimo sezulu zihlobene nemisinga yasolwandle noma ukusondela kwendawo olwandle.
Coastal zone vs maphakathi nezwe
Ake sicabange ngedolobha elisogwini uma liqhathaniswa nedolobha elingaphakathi nezwe. Kokuqala amazinga okushisa ngeke abe ngokweqisa kangako, ngoba ulwandle lusebenza njengesilawuli esishisayo futhi luzonciphisa ukungafani kwamazinga okushisa. Kumele futhi ubuke umswakama. Lokhu kuzoba kuncane ezindaweni ezimaphakathi nezwe lapho kungekho khona ugu. Ngalesi sizathu, isimo sezulu sasogwini sizobonakala (cishe) ngu amazinga okushisa amancane unyaka wonke nomswakama ophezulu. Ngakolunye uhlangothi, isimo sezulu sasendlini sizoba namazinga okushisa adlulele, kushise ehlobo futhi kubande ebusika, futhi kube nomswakama ophansi.
Iqiniso lokuthi ulwandle lusebenza njengesilawuli esishisayo kusho ukuthi kukhona umehluko othize wokushisa phakathi kwamanzi nomhlaba. Lokhu kudala umehluko wezinga lokushisa obangela umoya wasolwandle. Ngaphezu kwalokho, indawo engasogwini inamandla amaningi okukhiqiza umusi wamanzi nemvula.
Abalawuli besimo sezulu nencazelo yabo
Yize kungadalwanga, ukukhululeka kungenye yezilawuli zesimo sezulu ezibeka isimo sendawo. Luhlobo losizo oluvimbela ukungena kwenqwaba yomoya futhi lushintshe izinga lokushisa nomswakama. Lapho zingqubuzana nezintaba, ziyaphakama futhi, lapho zipholisa, zikhipha ngendlela yemvula.
Ukusakazwa komkhathi jikelele kuhlobene nesimo sezulu sendawo. Ngokuya ngomehluko wokushisa nengcindezi, singathola izindawo ezinengcindezi ephezulu nengcindezi ephansi. Lapho kunezindawo ezinengcindezi ephezulu isimo sezulu ngokuvamile sizinzile futhi uma sinengcindezi ephansi kuvame ukuba nemvula.
Esinye sezilawuli zesimo sezulu ukusibekela kwamafu. Uma inani lamafu akhona ngokuvamile likhudlwana, livumela imisebe yelanga engaphansi ukuthi ingene namazinga okushisa ashintshe. Ubumnyama bendawo bulinganiswa njengephesenti lezinsuku ezimbozwe ngonyaka. Izingqapheli zenhlonhlo yethu zikhombisa ukuthi indawo enezinsuku ezicace kakhulu ngonyaka yi-Andalusia. Yize isembozo sefu sinciphisa ukuvaleka, ngokuvimba imisebe yelanga, futhi kwenza kube nzima ukupholisa ingaphezulu.
Inkungu futhi ingaba ngomunye wabalawuli bezulu, yize iphindaphindeka kakhulu. Kuyinto eyenzeka njalo ezindaweni eziphakeme zezintaba, ezigodini nasemigodini yemifula. Uma kunomswakama owanele emoyeni, uyajiyana ungene enkungwini. Kwenzeka ikakhulukazi ekuseni.
Njengoba ukwazi ukubona, izilawuli zesimo sezulu zingaba sesimeni esincanyana noma esincane uma kukhulunywa ngokulingiswa kwaso, kepha zonke zinikela ngesinhlamvu esidingekayo sesihlabathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Izilawuli zesimo sezulu